Wisdom of Dhamma: 9/5/10 - 9/12/10
ငယ်စဉ်ကစကလို့ ရင်းနှီးနေတဲ့ စကားတစ်ခွန်း ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Live now တဲ့။ “ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်မှာ နေပါ” လို့ ပြန်ရင် နီးစပ်တန်ကောင်းပါရဲ့။
အချို့ လူတွေဟာ အတိတ်က အမှားတွေကို တွေးပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေတတ်တယ်။ အချို့ ကြပြန်တော့ မလုပ်လိုက်မိခဲ့တဲ့ အလုပ်တစ်ခုခုအတွက် ပြန်တွေးပြီး စိတ်ဆင်းရဲမှု ဖြစ်နေတတ်ပြန်တယ်။ အချို့ ကြပြန်တော့ လွတ်သွားတဲ့ ငါးက ကြီးနေတတ်ကြပြန်ရော။ ဒါပေမဲ့ ဘာ့ကြောင့်ပဲ အတိတ်ကို တွေးကာ ဆွေးနေ နောင်တရနေစေကာမူ အတိတ်ဆိုတာကြီးက ပြီးသွားပြီ။ သင်္ခန်းစာယူရုံကလွဲပြီး ပြန်ယူလို့မှ မရတော့တာ။ အတိတ်ကို တွေးတောလွမ်းမောနေရင် စိတ်ဆင်းရဲမှု၊ တွေဝေမှုဆိုတဲ့ မကောင်းကျိုးသာ ခံစားရမှာပေါ့။ ဒါကြောင့် အဲဒါကြီးကို မေ့ပစ်ဖို့လိုပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ အနာဂတ်မှာ ဘာတွေလုပ်မယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်မယ် ဆိုတာတွေကို စဉ်းစား၊ စိတ်ကူးတွေ တစ်သီကြီးနှင့် ဟုတ်နေပါတယ်။ အဲဒီလောက်ဆို ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အချို့က အဲဒီ အနာဂတ်ရေးကို မျှော်တွေးပြီးတော့ လိုအပ်တာထက် ပိုပူပန်လွန်းတတ်ကြ၊ စိတ်စောလွန်း တတ်ကြပြန် တယ်။ ဒီတော့ လက်ရှိအလုပ်ကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ မေ့နေတတ်ကြပြန်ပါရော။ ဒါမှမဟုတ် လက်ရှိအလုပ်အပေါ်မှာ တစ်နည်းနည်နှင့် သက်ရောက်မှု ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေကြောင့်လား မသိ၊ ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်ပဲ အာရုံစိုက်ပြီး အကောင်းဆုံး လုပ်ပါလို့ သတိပေးစကား ထွက်လာဟန် ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အနာဂတ်အတွက် အိပ်မက်မက်တာတို့၊ စီမံကိန်းဆွဲတာတို့ မလုပ်ရဘူးလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်တာ ကတော့ ထင်ရှားပါတယ်။
ဖြစ်ဆဲ ရုပ် နာမ် ပစ္စုပ္ပန်
အမှန်ကိုက်အောင် ရှု” ဆိုတဲ့ တရားလင်္ကာသံတွေကို နာကြားရ၊ မှတ်သားရ၊ ကျင့်ကြံရပြန်ပါတယ်။ ဖြစ်ပေါ်ဆဲ ရုပ်တရား နာမ်တရားတွေကို ဖြစ်ပေါ်ခိုက် တည့်တည့်မှာပဲ သတိကပ် အသိတပ်ပြီး ရှုမှတ်ဖို့ လမ်းညွန်ချက်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းသော အာရုံကို ဖြစ်ပေါ်ခိုက် တည့်တည့်မှာပဲ အာရုံနှင့် မှတ်သိစိတ်တို့ ကပ်နေအောင် ရှုမှတ်ဖို့ ညွန်ပြကြတာပါ။ ဒါကို မှတ်မိလွယ်အောင် လင်္ကာစီပေးထားတာပါ။ မဟာစည်ရိပ်သာမှာ တရားနာရင်း ဒီလင်္ကာကို နာကြားခဲ့ရတာဖြစ်လို့ ဘယ်သူ စပ်ဆိုတာလဲဆိုတာတော့ မသိပါဘူး။
နောင် အတော်လေးကြာတော့ “ဘဝတန်ဖိုး အရယူ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစီးနှင့်
ပညာ လုံ့လ၊ အသုံးချလက်
မြတ်နိုးကြည်ဖြူ၊ အရယူလော့” ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကို တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ ရွှေမြင့်မိုရ် မိုးကုတ် တရားစခန်းတစ်ခုမှာ ဒါယကာတစ်ဦး ယူလာတဲ့ ဆရာတော် Dr. အရှင် နန္ဒမာလာဘိဝံသရဲ့ “အတ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်း” စာအုပ်ပါးလေးရဲ့ ကျောဖုံးမှာ ရေးထားတဲ့ လင်္ကာလေးပါ။
ဒီလင်္ကာကို စာရေးသူက အောက်ပါအတိုင်း (ကိုယ့်အကြိုက်) ပြင်လိုက်မိပါတယ်။
စဉ်းစား ချိန်ဆ၊ ဓိဋ္ဌာန်ချပြီး
ပညာ လုံ့လ၊ အသုံးချလျက်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကဗျာတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ကောင်းသလို နောက်ခံကလဲ ကောင်းပါတယ်။ ဒီလင်္ကာကို မဇ္ဈိမနိကာယ် ဥပရိပဏ္ဏာသပါဠိတော် ဝိဘင်္ဂဝဂ်မှာ ပါတဲ့ ဘဒ္ဒေကရတ္တသုတ်လာ ဂါထာတော်တွေထဲက အစနှစ်ဂါထာကို အခြေခံပြီး ရေးထားတယ်လို့ ယူဆတာပါပဲ။ အဲဒီသုတ်တော်မှာ ပါတဲ့ ဂါထာတွေက မကြာခဏ ဖတ်သင့်တဲ့ ဂါထာတွေပါ။ တကယ်တော့ အဲဒီကျမ်းမှာ (၁) ဘဒ္ဒေကရတ္တသုတ္တံ၊ (၂) အာနန္ဒဘဒ္ဒေကရတ္တသုတ္တံ၊ (၃) မဟာကစ္စာနဘဒ္ဒေကရတ္တသုတ္တံ၊ (၄) လောမသိင်္ဂိယသုတ္တံ ဆိုတဲ့ နာမည်တွေနဲ့ ဒီဂါထာတွေကို ဖော်ပြထားတာဟာ ဒီတရားတော် ဘယ်လောက် အရေးကြီးသလဲ ဆိုတာ ဖော်ပြနေတယ်လို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်။
အတီတံ နာနွာဂမေယျ၊ နပ္ပတိကင်္ခေ အနာဂတံ။
ယဒတီတံ ပဟီနံ တံ၊ အပ္ပတဉ္စ အနာဂတံ။
ပစ္စုပ္ပနဉ္စ ယော ဓမ္မံ၊ တတ္ထ တတ္ထ ဝိပဿတိ။
အသံဟီရံ အသံကုပ္ပံ၊ တံ ဝိဒွါ မနုဗြူဟယေ။
အဇ္ဇေဝ ကိစ္စ မာတပ္ပံ၊ ကော ဇညာ မရဏံ သုဝေ။
န ဟိ နော သင်္ဂရံ တေန၊ မဟာသေနေန မစ္စုနာ။
ဧဝံ ဝိဟာရိံအာတာပိံ၊ အဟောရတ္တမတန္ဒိတံ။
တံ ဝေ ဘဒ္ဒေကရတ္တောတိ၊ သန္တော အာစိက္ခတေ မုနိ။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်။ ။ မဇ္ဈိမနိကာယ် သုံးကျမ်းကို I. B. Honer က ဘာသာပြန်ပြီး Pali Text Society (PTS) က ဖြန့်ချိထားတဲ့မူ ရှိပါတယ်။ နောက်တော့ ဒီကျမ်းတွေကို အင်္ဂလိပ် ဘုန်းတော်ကြီး ဘိက္ခု ဥာဏမောဠိ က ဘာသာပြန်၊ အမေရိကန်ဘုန်းတော်ကြီး ဘိက္ခု ဗောဓိက တည်းဖြတ်ပြီး Wisdom Publication, Boston ကနေ ဖြန့်ချိထားတာရှိပါတယ်။ ဘဒ္ဒေကရတ္တသုတ် သတ်သတ်ကိုတော့ Thanissaro Bhikkhu နှင့် Nyananda (ဥာဏာနန္ဒ) တို့က ဘာသာပြန်ထားတာလည်း ရှိပါသေးတယ်။ I. B. Honer ရဲ့ ဘာသာပြန်စာအုပ်က ရဖို့ခက်တာကြောင့် သူမရဲ့ ဘာသာပြန်ကိုပဲ ဒီမှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Swelter at the task this very day, who knows whether he will die tomorrow?
He indeed is 'Auspicious' called, described asasage at peace.
(Honer, I. B. (tr.), 1999, The Collection of the Middle Length Saying, vol. III, PTS, London, p. 233)
http://www.suttareadings.net/audio/index.html မှာ သွားရောက် ကြည့်မယ်ဆိုရင် Larry Rosenberg က ဒီဂါထာတွေကို ဖတ်ပြထားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အသံကို နားဆင်လိုရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်လိုလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာသာပြန်ကို တိုက်ဆိုင်ကြည့်ချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း မျှဝေလိုက် ရပါတယ်။
Posted by ဘုန်းဉာဏ် at Tuesday, September 07, 20100comments